परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुराहरुले तपाईको दिमागलाई तेज बनाउन सक्छ
जब विद्यार्थीहरुको परीक्षा नजिक आउँछ, उनीहरुको दिमागमा एउटा डर पैदा हुन्छ कि उनीहरू कसरी यति धेरै कुराहरु सम्झन सक्छन् ।
यसको लागि बच्चाहरू रातभर जागेर भएपनि पुस्तकहरू पढ्छन् र उनीहरूको दिमागलाई तिखार्ने हर सम्भव प्रयासहरु गर्दछन्, ताकि तिनीहरूले लाभ उठाउन सकून् ।
तर केही अध्ययन गर्न र याद गर्न, स्वस्थ हुनु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ । धेरै अध्ययनहरूले बताएका छन् कि केही कुराहरु छन्, जसको प्रयोगले मस्तिष्कको स्वास्थ्य र मानसिक प्रदर्शनलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ । त्यसोभए आउनोस् ती कुराहरूको बारेमा थाहा पाऔं ।
जब हामी परीक्षाको लागि तयारी गर्छौं, कहिलेकाहीँ हामी धेरैजसो कुरा सम्झन सक्दैनौं । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईं आफ्नो दिमागलाई तिखो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले दिनदिनै स्याउ खानु पर्छ ।
स्याउमा पाइने ‘क्र्यासटिन’ नामक एन्टिआक्सीडन्टले हाम्रो मस्तिष्क कोषहरूलाई क्षतिबाट बचाउँछ । एकै साथ, यदि त्यहाँ यी कोषहरूलाई कुनै प्रकारको क्षति भएमा यसले बौद्धिक क्षमतालाई ह्रास गर्दछ । साथै, स्याउको सेवनले अल्जाइमर जस्ता रोगहरूको जोखिम पनि कम गर्दछ ।
सोयाबाट बनेका खानेकुराले हाम्रो दिमागलाई तिखार्न पनि मद्दत गर्दछ, जसको कारण हामीले कुराहरु सम्झनको लागि धेरै मद्दत प्राप्त गर्न सक्छौं । सोयामा एण्टीक्सीडेन्टहरू तथा पोलिफेनोलहरू हुन्छन् । जब शरीरमा सोया उत्पादनहरूको अभाव हुन्छ, यसले मेमोरी कम गर्दछ ।
सोयाका उत्पादनहरूमा आइसोफ्लाभोन भनिने पोलीफेनोल हुन्छन्, जो रासायनिक एन्टिक्सीडन्टको रूपमा कार्य गर्दछ र हाम्रो दिमागमा सिधा लाभ दिन्छ ।
यदि तपाईंलाई अण्डा खान मन पर्छ भने, तिनीहरूले तपाईंको दिमागलाई द्रुत गतिमा मद्दत गर्न सक्दछन् । अण्डामा विभिन्न प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसैले अण्डाहरूलाई प्राय: प्रकृतिको मल्टिभिटामिन भनिन्छ । अण्डामा भिटामिनहरू- बी १२, कोलाइन र सेलेनियम मस्तिष्क संरचनाको लागि आवश्यक छन् ।
अण्डामा भिटामिन बी, बी-१२ र फोलिक एसिड हुन्छ र यी भिटामिनहरूले मस्तिष्कलाई संकुचन गर्नबाट रोक्छ । त्यसकारण अण्डा खानाले तपाईंको दिमाग तेज हुन सक्छ ।
यदि तपाईं मांसाहारी हुनुहुन्छ भने माछा खानबाट पनि तपाईं लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ । माछा खानाले दिमाग तेज बनाउँछ र तपाईंलाई पढेका कुराहरु सम्झना गर्नको लागी मद्दत गर्दछ । माछाले ओमेगा फ्याटी एसिडहरू समावेश गर्दछ, जुन हाम्रो मस्तिष्कको स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
भिटामिन बी १२ र माछाको सेलेनियम दिमागमा राम्रोसँग काम गर्न परिचित छ । यसबाहेक, सिट्रस फल अर्थात् अंगूर र सुन्तलाको सेवनले पनि हाम्रो दिमागलाई तेज बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।
नोट: यो सल्लाह तपाईलाई सामान्य जानकारी प्रदान गर्न मात्र दिइएको छ । तपाईले केही उपभोग गर्नुभन्दा पहिले वा कुनै घरेलू उपचार लिनुअघि आफ्नो डाक्टर वा विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु पर्छ ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्‍न के गर्ने ?
यस्ता छन् जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने अचुक उपाय
भारतका ६७ % हिन्दू अन्तरधार्मिक विवाहको विपक्षमा, मुस्लिमको संख्या अझ धेरै
पुरुषका लागि फाइदाजनक यी चार फलफुल
अनलाइनमा आक्रोश पोखेर भाइरल बन्ने र फलोअर्स बढाउने प्रवृत्ति बढ्दै
जीवन शैली, विश्‍व
नयाँ कानुन लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने चिनियाँको संख्या ह्वात्तै घट्यो
कोरोना संक्रमणबाट बच्न के गर्ने ? के नगर्ने ?
‘धनी मुलुकले प्राकृतिक स्रोत अत्यधिक प्रयोग गर्दा अन्य मुलुकमा गरिबी बढ्यो’
यी ८ आदत जसले हामीलाई बेलैमा बुढो देखाउँछन्
सुन्दर रहन चाहनुहुन्छः यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस्
यी कुराहरु पुरुषले गोप्य राख्नै पर्छ
राशीअनुसार कोसँग बिहे गर्ने र कोसँग नगर्ने ? यसो भन्छ ज्योतिषशास्त्र
टाउको दुख्ने समस्या कम गर्न यसो गर्नुहोस्
प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ ? यी पाँच कुरा अवश्य ख्याल राख्नुस्